Home dị iche iche Onyinye nka na ụzụ Gịnị mere ụgbọ elu eji eme ihe atụ na-efe? - omume ụgbọ elu
Vidiyo ọrụaka isiokwu na isiokwu “Gịnị mere a ụgbọelu nlereanya efe?”. Ndụmọdụ maka ndị mbido na ndị mbido. Olee otu ife efe kachasị? &Gbọ elu & ikuku na-efe efe. Chọpụta buoyancy, dọrọ, breakaway, polar, thermal, ọsọ ọsọ, ikuku windo na lee lee, okirikiri okirikiri, ebe ntụgharị, laminar flow, ọgba aghara eruba, thermals na mkpọda na ụgbọelu, bulie ọnụọgụ, ịdọrọ ọnụọgụ, wdg.
REDS DUO 2X BAE HAK 1/4 RC TURBINE JET Format FLlight STEVE & MATHEW BISHOP GERMAN CHAMPIONSHIP
Tags MbibiMbidombuliBulie ọnụọgụEbeneNdị mbidoNkọwantinye aka oruijijiNdị ahịa ụgbọ eluikowelaminar erubaWindward na Leek mapModelingModel na-efe efeFlightgbọ elu ụgbọ eluụgbọ elu igweOnyeka OnwenukachasịPolarRCMee ọsọ ọsọreviewsGhọta thermalsKwes na-efe efeAtụmatụỌgba agharaEbe mbufeVideom weguzogideDọrọ ọnụọgụOkirikiri okirikiri